I-Semalt Yabelana Ngeziqondiso Zokuqeda Ukufakela Ugaxekile Ngokufaka Amagama E-hostnam Amakhulu
Amabhutshisi aphuza isayithi lakho enethemba lokuqoqa idatha, okuyiyo enkulu noma eyesabekayo. Isibonelo, i-Google bot ehamba ngamasayithi inhle ngenxa yezinhloso zokukhomba ngenkathi njengabantu abesabekayo beqoqa imininingwane (njengemiyalezo), elungisa iseva yakho futhi efuna izinsizakalo.
I-spam eyaziwa kakhulu kunazo zonke ezitholwe uphenyo ngoba ayivakashele amasayithi. Idlulisela ulwazi ngqo ku-akhawunti ye-Google Analytics ngaphandle kokuxhumana nhlobo. Amasayithi agxila kakhulu, ngakho-ke awukhathazeki ngokukholelwa ukuthi yisayithi lakho nje abayifunayo.
Igor Gamanenko, iMenenja Yokuphumelela Kwekhasimende Semalt , unikeza lapha isixazululo esiwusizo sokugwema ugaxekile wokudluliselwa.
Ukuqaphela Ugaxekile Wokudluliselwa
Vula i-akhawunti ye-Google Analytics ngaphansi kweMpahla futhi konke ukunyakaza bese Ukudlulisela ungathola nje, yiziphi amagama ezidlulisela umsebenzi ngokufanele. Kumele ukhethe isandiso sosuku olwedlulelwe kakhulu ukuze uqiniseke ukuthi unolwazi olwanele lokubona noma yikuphi ukungekho emthethweni. Umzamo wokuqokomisa ngezimo ezimbalwa ezingavamile ezilinganisweni kuzosiza ekususweni kolwazi olungenangqondo.
Ngaphambi kokubhekana nokukhathazeka okuyinhloko, kunenye indlela okufanele ihlolwe njalo ku-akhawunti ngayinye ye-Google Analytics mayelana nomthelela wokugaxekile we-ghost. Bheka indawo bese uqhafaza i-Checkmark esekelwe ku- "Bhabha yonke iminwe yezintambo ezibukeke nezimbungulu". Lokhu okunye kuzokwenzeka ngokwemvelo ukuhlunga imithombo ekhethiwe yogaxekile kusuka ku-Google Analytics.
I-Google Analytics inekhethelo lesiteshi esiphelele esinikeza ikhono lokulahla umsebenzi wogaxekile wesikhathi esizayo kusuka olwazini lokuphenya. Ama-referrals ama-phony ayengabikho emakhakheni ahlangene okwenyuka ngesikhathi esifanayo, ngale ndlela agcina umthombo womsakazo wogaxekile phezu kwesikhathi eside. Indlela engcono kakhulu yokuyilwisana nabo ebonakala ku-Google Analytics ukwenza isiteshi esanda kuhlanganisa amagama abamba ngokusemthethweni, umsebenzi wangempela kusayithi lethu.
Ukuhlukanisa ama-hostnames akho amakhulu ukuya ekuqoqweni kwabantu bese ku-Innovation bese ku-System. Isikhathi esiphezulu sesikhathi sisetjenziswa ukugijima, ngakho-ke awuphuthelwa nanyana yiluphi ulwazi. Ngokuthepha isilinganiselo segama lomsingeli, uzobona i-rundown yazo zonke amagama ezigama, kufaka phakathi ugaxekile futhi thola lezo ezisemthethweni zokuqedela ulwazi..Ngokuhambisana nesilinganiso sokunyakaza okukhiqizayo, kungase kudingeke ufake i-translate.googleusercontent.com njengamaklayenti angabonisa izinsizakalo zokuqukethwe kwamasayithi wakho.
Endabeni ye-Neuralab, singasebenzisa ukukhulumisana kwe-regex ngenkathi kufaka ama-hostnam esiteshini.
Ngokusebenzisa lokhu kukhuluma, sisanda kuhlanganisa ukuhamba konke okuvela ku-blog.neuralab.net. Noma www.neuralab.net. Uma kwenzeka uthole amanye ama-hostnames amakhulu, ungawafaka ekukhulumeni kwe-regex, ngakho akudingeki uwafake ngemuva kokunye. Ngemva kokuthola wonke ama-hostname, kuyithuba elihle lokuzifaka eziteshini.
1. Vakashela indawo yomqondisi we-Google Analytics bese uthepha eziteshini.
2. Faka isiteshi esisha bese uyibiza njengezidingo.
3. Khetha uhlobo lomzila wesiteshi bese ukhetha ukufaka (kufanele kwenziwe!).
4. Khetha igama lomngane ngaphansi kwensimu yesiteshi.
5. Ngaphansi kwesiteshi, faka ukuhlanganiswa kwe-regex okubandakanya i-hostnames yakho yangempela
6. Thepha ekusindisweni kwesithonjana, futhi usuqedile.